*** Media လောကအား ချည်းကပ်ကြည့်ခြင်း*** ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 3:30 PM | No မှတ်ချက် |
Media ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ လူထုအားပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍပင်ဖြစ်သည်။ တနည်းဆိုရသော် Media = Communication to People + Feedback from People ဟုလည်း ကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်။ မြန်မာပြည်၏ ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍသည် ပွင့်လင်းလာမှု အနည်းငယ်ရှိလာသည်မှာ သိပ်မကြာသေး။ ယခင်နှစ်ပေါင်းများစွာ အာဏာရှင်လက်ထက်များဆီက အစိုးရမီဒီယာများ (Traditional Medias) ဆီကသာ အများဆုံး ကြားခဲ့သိခဲ့ရပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက် (Information) ထိန်ချန်မှုတွေများခဲ့ပါတယ်။
လူထုအား သတင်းအချက်အလက်များ ဆက်သွယ်ပြန်ကြားရာတွင် ယခင်ဆယ်စုနှစ်များက (TV, Radio, Newspaper, Journal) တို့ဖြစ်သာတွင်ကျယ်ခဲ့ကြသော်လည်း ၂၁ရာစုကို ချည်းကပ်လာချိန်မှာတော့ Computer, Mobile Phone နဲ့ချိတ်ဆက်သော Internet အသုံးပြုမှုတစ်ကမ္ဘာလုံး ( World Wide Web မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ World Wide Wait ) ကျယ်ပြန့်လာလေသည်။ ကမ္ဘာကြီးသည် အစက်အပြောက်မျှသာ (World in spot) ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ Internet အသုံးပြုခြင်းမှာ Email, Gmail, Yahoo စသည့် ကိုယ်ပိုင်စာတိုက်ပုံးငယ်များဖြင့် ဆက်သွယ်ကြသကဲ့သို့ Social Website များဖြစ်တဲ့ Facebook, Twitter တို့နှင့်အတူ အင်တာနက်အသုံးပြုသူ လူတိုင်းနီးပါး လူမှုကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှု၊ အသုံးပြုမှုတွေလည်း မြှင့်တက်လာပါတယ်။
သတင်းအချက်အလက်သစ်တွေ၊ ကိုယ်သိထားတာတွေ၊ သိချင်တာတွေ၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း၊ တူရာ အဖွဲ့အစည်းအလိုက် ဖန်တီးလွှင့်တင်လာကြပြီး ယခင်က မိမိအယူအဆတွေကို အဖွဲ့အစည်းအကျိုးအတွက် ချမပြနိုင်ခဲ့တဲ့ အဟောသိကံဖြစ်ခဲ့ရတာတွေ ချပြလာနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီတပ်လှန့်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ထိရောက်မှုပိုရှိလာတဲ့ လွတ်လပ်သော၊ အစိုးရမီဒီယာတွေကို မမှီခိုသော Citizen Media လို့လည်းခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ နိုင်ငံသားအချင်းချင်း ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး ထွန်းကားမြှင့်တက်လာပါတယ်။ သာဓက အနေနဲ့ တူနီးရှားလမ်းဘေးဈေးသည်လူငယ်တစ်ဦးမှစတဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလောက်တဲ့ Citizen Media ရိုက်ခတ်မှုတွေအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနဲ့ မြောက်အာဖရိကတို့မှာ ဒီမိုကရေစီတွန်းအားဖြစ်စဉ် (Democratization) ကြုံတွေခဲ့ရပြီးပါပြီ။ ၀ီကီလိတည်ထောင်သူ ဂျူလိယက်အက်ဆန်ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်ဖောက်ချမှုဟာလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ တကမ္ဘာလုံး ကိုပင် တုန်လှုပ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရမီဒီယာတွေရဲ့ တစ်ပုံတစ်ပင်ထိန်ချန်ထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ကာကွယ်ဖုံးထားနိုင်မှုတွေ ရှားပါးစပြုလာတယ်။ သို့သော်လည်း သတင်းအချက်အလက်တွေ အလျှံပယ်ပေါများလာခြင်းဟာ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး ဖြစ်စေနိုင်ပြီး သတင်းအသစ်တွေတင်ရာရင်းမြစ်တွေကို ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်စွမ်း (Analytical Thinking)နှင့် ကြောင်းကျိုးဆီလျော်မှုရှိစွာ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်း (Critical Thinking) ရှိနေမှသာ မိမိလက်ခံယူသော တဆင်ခံ Grapevine Message သည် ကောလဟာလသတင်း(Rumors)၊ ထွင်လုံးဇာတ်လမ်း(Gossips & Fabrication) ဟုတ်မဟုတ်သိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး တိကျမှန်ကန်မှုရှိတဲ့ ယုံကြည်အားကိုးရမယ့် သတင်းအရင်းအမြစ်တွေကို မူလအရင်းအမြစ်ကနေ အခြားအမြောက်အမြား ပွားယူဖြန့်ဝေနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ နဂိုရှိရင်းစွဲ ခြုံငုံယူဆထားတဲ့ (Holistical Thinking) မျိုးကိုသာ စွဲထင်မှတ်ယူထားမယ်ဆိုရင် မိမိအကြိုက် Media က ဖြန့်ဝေတဲ့ Grapevine Message ကို မှား၏မှန်၏ မသိတော့ အလွယ်တကူ လက်ခံထားနေသလိုဖြစ်ပြီး စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုကင်းမဲ့သော နွားရှေ့ထွန်ကျူးလုပ်ရပ်မျိုးကို အကြိုက်ကြီးကြိုက် အမှားကြီးမှားနေကြပေဦးမည်။
နောက်ထပ် သတင်းလွှင့်တင်သူတွေအနေနဲ့လည်း မိမိထင်ရာမြင်ရာ(Opinion) စိတ်ခံစားချက်ကိုလိုက်ပြီး မိမိနှစ်သက်ရာ (Preference) နဲ့ ယုံကြည်မှု (Belief) တွေပေါ်ကို အခြေခံရေးသားနေမယ်ဆိုရင် သမာသမတ်ကျမှု (Impartial) နဲ့ဝေးနေဦးမှာပါဘဲ။ မိမိရဲ့ မှန်သောအချက်အလက် (Facts) ကိုသာလျှင် ဦးစားပေးရေးမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဘက်လိုက်ခြင်း (Bias)နဲ့ သမာရိုးကျအတွေးအခေါ် (Stereotyping)ဆိုတဲ့ ၀ဲဂရက်ထဲက တ၀ဲလည်လည်ဖြစ်နေရခြင်းကို ကင်းဝေးစေပြီး နိုင်ငံသားတွေအကျိုးကို ပိုပြီးထိရောက်စွာ သိစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ်ကို သုံးခြင်းသည် အမှန်တရားကို မြတ်နိုးခြင်းသာဖြစ်သည်။
“Democracy is not just about voting. In democratized media, participation is vital. We must learn to use media by becoming active participants in the way we consume and create our own trusted information. This isamodern version of what has been called ‘Media Literacy’. “ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ မဲပေးတာသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ မီဒီယာတွေမှာ ပါဝင်ပူးပေါင်းဆက်ဆံရေးဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ မိမိတို့ရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို လက်ခံရယူခြင်း၊ ဖန်တီးခြင်း လမ်းကြောင်းတို့မှာ နိုးကြားတဲ့ ပါဝင်ဆက်ဆံသူများ ဖြစ်လာနိုင်စေဖို့ ပြန်ကြားဆက်ဆံရေးကို အသုံးပြုရန် လေ့လာရမယ်။ ဒါကို ခေတ်သစ် မီဒီယာစာပေတတ်မြောက်ခြင်း လို့ခေါ်တယ်။
ခေတ်သစ် မီဒီယာစာတတ်ခြင်းမှာ ခြွင်းချန်ကျန်ရစ်မနေသော၊ တိကျမှန်ကုန်သော၊ တရားမျှတသော၊ မည့်သူကိုမှ မမှီခိုပဲ လွတ်လပ်စွာရှိနေသော မီဒီယာကြီးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ဆုံချင်ပါသေးတယ်။
— with လင်း သက် and 32 others.